काठमाडौवाट हेटौंडा जाँदै गरेको स्कार्पियो र मोटरसाइकल पहिरोमा पुरीयो : चाल`कको नि`धन, २ जना घा`ईते ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौवाट हेटौंडा जाँदै गरेको स्कार्पियो र मोटरसाइकल पहिरोमा पुरीयो : चाल`कको नि`धन, २ जना घा`ईते !
काठमाडौवाट हेटौंडा जाँदै गरेको स्कार्पियो र मोटरसाइकल पहिरोमा पुरीयो : चाल`कको नि`धन, २ जना घा`ईते !
काठमाडौ । काठमाडौँ बाट हेटौँडा जाँदै गरेको एक स्का`र्पियो जिप पहिरोमा पु`रिँदा एक जनाको नि`धन भएको छ। सोही वाटोमा गुडेको दुई जना सवार मोटरसाइकलमा पनि क्षती पुगेको छ । मोटरसाइकलमा सवार दुई जना घा`इते भएका छन् ।
बुधबार बिहान काठमाडौँ बाट हेटौँडा जाँदै गरेको बा १७ प ४८७४ नं को स्कार्पियो पहि`रोमा पुरीएको हो भने बा ९७ प ४८५१ नं को मोरटरसाइकल पनि पहि`रोमा परेको थियो । भीमफेदी–कुलेखानी सडक खण्ड अन्तर्गत इन्द्र`सरोवर गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिँदा चालकको स्का`र्पियो चालकको नि`धन भएको हो । उनको सनाखत हुन सकेको छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्या`लयका प्रवक्ता ईन्द्र बहादुर रानाले अविरल वर्षाका कारण माथिबाट खसेको पहिरोले स्कार्पियो पुरिँदा चालकको नि`धन भएको बताए। पहिरोमा परेर मोटरसाइकलमा यात्रा गरेका दुई जना घा`इते भएका हुन् ।
उनीहरुको पनि नाम खुलेको छैन । उक्त पहिरोले काठमाडौँबाट हेटौँडा जाँदै गरेको मोटरसाइकलमा क्ष`ती पुगेको हो । घाइतेलाई उपचारका लागि काठमाडौंँ ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ।`
भाग्य न्यौपानेलाई ठुलो झ’ट्का: भाग्य बि’रुद्ध मु’द्दा दर्ता, पुष्पा अधिकारीलाई दुरव्य’वहार गरेको आ’रोप(भिडियो)
सोमबार देखि फेरि भारी बर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानको ख`तरा